Misy indray ireo fiaramanidina miainga mivantana any ambanivohitra lavitry ny maso. Maro izy ireny no miainga any Ihosy, Betroka, Sakaraha, Ilakaka mitondra ireny safira sy vato sarobidy, sokatra, hyppocampes ireny, eo ampototry ny fiaramanidina matetika no hanaovana ny fifamarotana ny an'ny sasany.
Betsaka ihany koa ny mandeha sambo, izay mitovitovy ihany ny fomba fanao. Maro ireo entana lazaina fa katsaka, na kabaro, tsaramaso ahondrana any ivelany, fa entana hafa mihitsy no ao anatiny. Misy ireo vedette no mitondra ny entana dia mampita izany amin'ny sambo eny ampoavoan-dranomasina.
Vao aingana, nisy olom-boafidy ambony mihitsy, niala tao Toliara tamin'ny vedette nihazo an'i Maintirano, avy eo tsy hita ny nalehany, ny APMF misahana ny fanaraha-maso ny sisin-tany tsy afaka nanao ininona.
Ny ao Mahajanga, ireo crevette, na "or blanc" no iantsoana azy, dia feno olona ambony manao trafika azy, tsy entina ety an-tanety ireo caisse na baoritra efa vita fono, fa avy dia mitsaka sambo vaventy hafa ampovoan-dranomasina eny.
Ny bois de rose moa amin'izao dia mbola mitohy hatrany ny trafika momba azy, misy aza atao anaty camion citerne mihitsy ny asiana azy, dia tafaporitsaka etsy sy eroa adaholo izany. Ilay karana tao Atalaha niapanga tena teo anivon'ny fitsarana fa nanao trafikana bois de rose moa aza hatramin'izao mirihariha eny, na ny ministeran'ny tontolo iainana tsy nihetsika mba nanamarina raha mbola tao ny stok amin'arivony nananan'ity karana ity, fa dia nitory olona roa hafa indray izy fa namarotany bois de rose fa tsy nandoa ny volany, dia mbola nomen'ny fitsarana taratasy ahafahany mitaky izany volana bois de rose tsy voaloa, izay namidy aty aoriana lavitry ny taona efa nahavoarara ny famarotana bois de rose.
Misy ny Police de la Fontière, ny douanier mihitsy koa no kopaka iray amin'izy ireo. Ny service de sécurité aéroportuaire moa dia io izy hifandrombahan'izy ireo ny hifehezana azy io, satria io no misahana ny scan entana sy ny sécurité aéroportuaire. Misy amin'izy ireo rahateo no manana fiaramanidina manokana ahafahana mivezivezy tsy hita ny entana entiny.
Mety ho mora ny mamoaka entana eto Madagasikara, nefa ny mampiditra azy any amin'ny firenen-kafa mbola tantara hafa. Ny rongony dia atsy Maurice no betsaka alefa, ny volamena kosa dia any Dubai, ka na mandalo Kenya, na Afrika atsimo, na mandeha fiaramanidina mivantana.
Misy ihany koa ny mampiasa ny accréditation diplomatique, satria ny entan'ny ambassade dia tsy savaina, na kontenera io na valise diplomatique. Izany no mahamaika ny sasany ho tendrena any amin'ireny ambassade ireny, ary betsaka ireo tokony efa mody na retraite fa tsy mety mody fa midongy any. Betsaka aza moa ny eto amintsika ireo mpanam-bola no lasa Consul n'ny firenena iray, mba ananany izay immunité diplomatique izay, ary betsaka koa ny antsika ny Consulat malagasy, nefa tsy Malagasy ny Consul any fa mpanam-bola amin'ny firenen-kafa no manao ny asan'ny Consul Malagasy any.
Porofon'izany mpanao politika efa retraite no alefa atao ambasadoro, na ho fisaorana azy, na hanasitahan'azy tsy hietsiketsika eto an-tanindrazana, fa tsy misy vokatra na ny kely aza entiny aty Madagasikara amin'ny maha ambasadoro azy any. Ireo matihanina namono tena nianatra izany diplomatie izany mitarika posy sisa tsy hatao fa tsy mahazo asa.
Ny ministeran'ny raharaham-bahiny, ministera poakaty, zara raha misy ilana azy, fa ny Présidence avokoa no manao izay tiany atao.
Tsy maintsy manana taratasy fanondranana ilay volamena izy izany, eo izany dia efa misy mpiray tsikombakomba any amin'ny ministeran'ny harena an-kibon'ny tany sy ny ministeran'ny vola, ary manana mpiray tsikombakomba ao amin'ilay douane sy securité aéroportuaire ihany koa.
Ny mpitondra rongony moa dia manantena fa tsy ho hitan'ny scan, na efa manana mpitsikombakomba ao amin'ny douane sy Police de la Frontière na PAF ary ny sécurité aéroportuaire.
Fa matetika rehefa manomboka zatra ilay "mule", na rongony io na volamena no entiny dia ilay Boss ihany no manapanga ny ao amin'ny aéroport na ny aty Madagasikara, na ny any ivelany, dia tratra ilay "mule" natao sorona, dia miova "mule" mora ampiasaina hafa indray.
Izay no mahatonga ilay hoe mahavita mampita 3 na 4 na in-dimy dia vonoina ny "mule".
Ka eto izany aza mampiresaka hoe tsy teo ny douanier, katsaka tsaramaso, fa "mule" novonoina ireo tratra ireo. 10 tonnes isan-taona ny volamena mivoaka eto Madagasikara, sac de ciment 1 milanja 73kg fotsiny io tratra io.
Fa miandry izahay, iza ny anaran'ireo "mule" ireo, iza ny douanier sy PAF tao, iza no securité aéeroportuaire tao, iza ny pilote sy équipage tao, aiza ny andraikitry ny tompon'ny fiaramanidina, iza ny sofera nitatitra ireo "mule" ireo, iza no nanome alalana tao amin'ny ministeran'ny mine sy ny vola, aiza ny andraikitry ny Aviation Civile de Madagascar na ny ACM manome alalana ny fiaramandidina hiainga.
Ny mule tsy hi risque hamoaka 73kg any Afrika atsimo tsy misy taratasy na sandoka aza, anjaran'ny any no misambotra ny mpiray tsikombakomba any, fa azo antoka fa tsy maintsy efa misy mpamoaka any, tsy misy adala hitondra volamena 73kg ka hanantena ny hoe hivoaka tsotra, ary tsy misy mpanam-bola hanome ny volamenany 73kg ho entina "mule" ka ho raisim-potsiny izany, efa ao ny tokiny matoa izy mandefa.
Ary ny zava-dehibe indrindra, iza ny commanditaire na ny Boss tena tompon'ireo volamena ireo.
Raha tsy mivoaka izay dia mpiray tsikombakomba izay tompon'andraikitra amin'izany ary tsy ho afa-bela eto.
Aoka izay ny fanaovana tantely hafa-drakotra ny harem-pirenena.
Fotoana izao andriamatoa Filoha anehoanao ny teny efa nataonao fa tsy manaiky ny kolikoly ianao, ary tsy manaiky ny anaovana ny harem-pirenena ho varo-boba toa izao.
Na iza na iza nikasika io resaka volamena io, eny hatrany amin'ireo namatsy, na nandredrika azy ho lasa lingot, raha tsy ara-dalàna ny fitrandrahana na famarotana natao aza, dia asehoy vahoaka avokoa.
Takio amin'ny Afrika Atsimo ireo volamena 73kg ireo, ary avy hatrany dia asehoy ny olona fa nanamboarana sekoly, hopitaly, lalana, nomena ny kere, fa tsy hoe nalefa any amin'ny banky foibe dia very an-javony any indray, satria efa maty ny "mule" dia misy "mule" hafa indray hipoitra.
Ajanony ireo fako mpanao com milaza fa ny mpanohitra indray io, na ireo mpanoariana te hamotika ny vinan'ny filoha izay iainga. Tsy misy adala ny olona fa atsaharo ny fanilihana andraikitra, eny na olona inona na inona antokony, tsy afa-miala andraikitra ianareo mpitondra satria aéroport mikatona sisin-tany nefa lasa nibanaka, iza no tompon'antoka amin'izany?